Akụkọ - Gini bu nzipu USB?
Otú ọ dị, mbipụta a nke ndakọrịta na-achọ ịbụ ihe gara aga na iwebata nkọwapụta Ike USB. Nyefee Ike USB (ma ọ bụ PD, maka obere) bụ otu ọkọlọtọ na-akwụ ụgwọ enwere ike iji ya gafee ngwaọrụ USB. Nọmalị, ngwaọrụ ọ bụla nke USB boro ebubo ga-enwe ihe nkwụnye ha dị iche, mana ọ bụghị ọzọ. Otu USB PD zuru ụwa ọnụ ga-enwe ike ịme ọtụtụ ngwaọrụ dị iche iche.
Atọ atọ dị ukwuu nke nnyefe ike USB?
Yabụ ugbu a ị maara ntakịrị ihe ọkọlọtọ nnyefe USB Power bụ, kedụ ụfọdụ akụkụ buru ibu na -eme ka ọ baa uru? Nnukwu ihe osise bụ na nnyefe Ike USB amụbawo ogo ogo dị elu ruo 100W. Nke a pụtara na ngwaọrụ gị ga-enwe ike ịgba ụgwọ ngwa ngwa karịa ka ọ dị na mbụ. Ọzọkwa, nke a ga-arụ ọrụ maka ọtụtụ ngwaọrụ ma ọ ga - adị mma maka ndị ọrụ Nintendo Gbanye, ebe ọ bụ na e nweela ọtụtụ mkpesa banyere ya na - akwụ ụgwọ ngwa ngwa.
Ihe ọzọ dị mma nke USB PD bụ eziokwu na anaghịzi edozi ikike ike. N’oge gara aga, ọ bụrụ na i tinye ekwentị gị na kọmputa, ọ ga-akwụ ụgwọ ekwentị gị. Mana iji nweta ike, ekwentị ị ga - adọnye maka ike draịvụ ike gị.
Nnyefe Ike ga-ahụkwa na akụrụngwa anaghị akwụ ụgwọ na ọ ga-enye naanị ihe dị mkpa maka ihe ọ ofụ juiceụ Ezie na ọtụtụ smart phones agaghị enwe ike iji uru agbakwunyere, ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ na kọmputa ga-enwe ike.
Nyefe Ike - Dnapụta Ọdịnihu
Na mmechi, ọkwa ọhụrụ a maka USB nkwụnye ụgwọ nwere ike ịgbanwe ụwa nke teknụzụ dịka anyị si mara ya. Site na nnyefe ike, ọtụtụ ngwaọrụ nwere ike ịkekọrịta ebubo ha na ibe ha ma nye onwe ha ike na enweghị nsogbu. Nnyefe Ike bụ ụzọ dị mfe karị na ụzọ dị mfe iji wee were ụgwọ maka ngwaọrụ gị niile.
Dika igwe na ekwenti anyi no n’iru n’eji aru ike, nnyefe ike USB dikwa o kariri. Ọbụna ụlọ akụ ike ugbu a nwere USB PD iji kwụọ ma ọ bụ rụọ ọrụ ngwaọrụ ndị chọrọ ike dị ukwuu (chee MacBooks, Switches, GoPros, drones na ndị ọzọ). N’ezie anyị n’ele anya ọdịnihu ebe enwere ike ịkekọrịta ike.